१३ वर्षीया विद्यार्थीसँग यस्तो कर्तुत गरेपछि शिक्षिक पक्राउ ! – हाम्रो ईकोनोमी
१३ वर्षीया विद्यार्थीसँग यस्तो कर्तुत गरेपछि शिक्षिक पक्राउ !
विद्यार्थीसँग अवैध यौन सम्बन्ध राखेको भन्दैं एक अमेरिकी शिक्षीकालाई १० वर्षको सजाय तोकिएको छ । अमेरिकाको ह्यूस्टन एक स्कुलमा यस्तो घटना भएको हो । यहाँ अंग्रेजी विषय पढाउने २४ वर्षीया एलेक्जेन्ड्रा वेरालाई १० वर्षको जेल सजाय भएको हो ।
उनले १३ वर्षको बालकसँग अवैध सम्बन्ध बनाएको आरोप लागेको छ । १३ वर्षको विद्यार्थीसँग सम्बन्ध बनाएपछि उनी गर्भवती भएपछि यो घटनाको रहस्य खुलेको हो । ति शिक्षीकाले ति विद्यार्थीलाई आफ्नो भाई भएको दावी गर्ने गरेकी थिईन् । छिमेकीहरुसँग उनले आफ्नो भाइ भएको भन्दैं सम्बन्धमा रहने गरेकी थिइन् ।
उनीहरु विदाको समयमा घुम्न जान्थे र उनले ति विद्यार्थीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर भए पनि सम्बन्ध बनाउँने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी गर्भवती भएपनि विद्यार्थीको परिवारले यस घटनाको बारेमा जानकारी पाएको थियो । अमेरिकामा नाबालसँग यौन सम्बन्ध राख्ने त के उनीहरुसँग बसेर अश्लील सामाग्रि हेर्दा पनि ठुलो अपराधको रुपमा लिने गरिन्छ् । एजेन्सी